Zidane oo Garsooreyaasha Horaalka Spain ku eedeeyey iney 9 dhibcood ka khasaariyeen | Ciyaarside.com
Zidane oo Garsooreyaasha Horaalka Spain ku eedeeyey iney 9 dhibcood ka khasaariyeen
Real Madrid ayaa dagaal la geleysa garsooreyaasha horyaalka La Liga, ka dib markii ay weerar ku qaaday habka ay xilli ciyaareedkaan 2017 illaa 2018 u garsooreen kulamadooda, sidaas warbaahinta Spain ayaa maanta daabacday.
Majaladda El Mundo Deportivo ayaa sheegeysa inay maamulka Los Blancos ka careysan yihiin qaabka ay garsooreyaasha horyaalka La Liga u dhexdhexaadiyeen kulamadoodii xilli ciyaareedkaan.
Sidoo kale Los Blancos ayaa ka careysan ganaaxii shanta kulan ahaa ee la duldhigay weeraryahankeeda Cristiano Ronaldo ka dib markii uu kala tuuray garsoorihii dhexdhexaadinayey lugtii hore ee finalka Spanish Super Cup.
Ronaldo ayaa sidoo kale la ganaaxay qiimo lacageed dhan 3 kun oo Euros ka dib markii uu kala tuuray garsoore Ricardo De Burgos. Maamulka Real Madrid ayaana haatan aaminsan inay dhibaatada ugu badan ee xilli ciyaareedkaan heysata ugu wacan yihiin garsooreyaasha Spain oo kasoo horjeeda.
Intii Sabtidii lagu jiray ciyaartii Madrid derby, Real Madrid ayaa dareentay in laga eexday iyadoo seddax rigoore oo muuqda uu ka diiday garsoore David Fernandez, sidoo kale Atletico Madrid ayaa u qalantay in laba ciyaaryahan casaan laga siiyo, sida ay aaminsan yihiin maamulka Los Blancos.
Warbixinta ayaa intaas ku dareysa in kooxda tababare Zinedine Zidane ay aaminsan tahay inay 9 dhibcood u lumisay go’aanka garsooreyaasha ee kasoo horjeeda xilli ciyaareedkaan awgiis. Sidaas darteed haddii ay Real Madrid ku guuleysan laheyd sagaalkaas dhibcood haatan keliya hal dhibic ayey ka dambeyn laheyd Barcelona.